Caral, njem nleta mgbe ochie na Peru | Akụkọ Njem
Peru ọ bụ mba kachasị adọrọ mmasị, site na echiche ihe ochie, na South America. Omenala ya bara ọgaranya ma ị ga-ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na ị hụrụ akụkọ ihe mere eme na nkà mmụta ihe ochie n'anya. A mara mma.
Oge ụfọdụ gara aga anyị kwuru maka Huayna Picchu ma taa ọ bụ ntụgharị nke Karal, bụ ebe ọzọ ị ga-aga leta. Ọ dị naanị kilomita 182 site na Lima, isi obodo Peruvian, ma ị nwere ike ịga onwe gị ma ọ bụ debanye aha maka njem. N'ebe a, anyị hapụrụ gị nhọrọ niile gbakwunyere ihe niile ịchọrọ ịma iji mara ya.
2 Nleta Caral
3 Ihe ị ga-ahụ na Caral
Ebe ochie dị nso na Lima, na ndagwurugwu Supe. Ndị ọkà mmụta ihe ochie kwuru na ọ nwere ole na ole puku afọ ise ya mere na mkpakọrịta nwoke na nwanyị ahụ bụ obodo kacha ochie na kọntinent ahụ. N'ụzọ doro anya, UNESCO tụlere ya Ebe ihe nketa ụwa.
Ihe mgbagwoju anya nke ụlọ arụsị na ụlọ, na ọdịghị ụkọ pyramid, Ndi wuru ya site na ndi anakpo Caral Civilization nke dika ndi okacha amara di iche siri kwalite rue 3 na 1800 BC Ọ bụ n'oge a na mmepeanya nke Sumer, India, China, na Egypt. Nkọwa ọzọ nke na-enweghị ike ileghara anya na-ewu pyramid, ọ bụ eziokwu? Na ajụjụ kpatara eji wuo ụlọ ndị a n'ụwa niile na-abịaghachi n'ike n'ike ...
Karal ọ dị kilomita iri abụọ na atọ site n’akụkụ osimiri Pasifik anyị nwere ike ịchọta ya n’ime otu ụlọ ebe n’otu mpaghara, a ndagwurugwu na-eme nri ma na-eme nri, ya na ugwu n thatchebe ya. E nwere obodo asatọ mana Caral bụ nke kacha adọrọ mmasị. Ọ bụ ihe ịtụnanya na achọtaghị mkpọmkpọ ebe a rue narị afọ nke XNUMX, ma ọ bụ ikekwe ọ ka mma, mana ọ bụ ụfọdụ ndị nyocha North America ha hụrụ ya na 1949.
Afọ iri anọ na atọ gara aga otu onye na-amụ banyere ihe mgbe ochie na Peru debanyere mkpọmkpọ ebe ahụ mana ọ bụ rue 43 ka e gwupụtara saịtị ahụ ma site na mgbe ahụ nchọnchọ nke mkpọmkpọ ebe ahụ dị oke njọ. Site na mkpakọrịta nwoke na Carbon 1979, ndị ọkà mmụta ihe ochie kpebiri na Caral dị afọ 14, ya mere ịmara ya gbanwere ihe niile e chere banyere mmepeanya America. N’ezie, ruo taa amabeghị ihe kpatara eji gbahapụ obodo ma ọ bụ maka na mmepeanya dara.
Caraga Caral ị nwere ike ịga ụgbọ ala, njem ma ọ bụ ụgbọ njem ọha. Ọ bụrụ na ịhọrọ usoro ikpeazụ a, ị ga-agba bọs na Lima nke na-aga ugwu, gaa Supe, ihe dị ka kilomita 187 nke Panamericana Norte. Ga-apụ n'ahịa Supe naanị otu ngọngọ site na ebe ị nwere ọkwa tagzi nke na-akpọga gị na Caral. Nwere ike ime ndokwa ka ọ bulie gị n'oge ụfọdụ ma mechie ihe niile.
Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịnara bọs ọzọ na-agbakọta n'otu ebe ahụ nke hapụrụ gị n'ọnụ ụzọ mgbagwoju anya, nkeji 20 si na ya na-eje ije. Cargbọ ala ị gafere ụzọ Panamericana Norte ruo kilomita 184, tupu obodo Supe, ma soro akara ngosi ndị ga-eduga gị na Caral. Ihe mgbagwoju anya emeghe site na Mọnde ruo Sọnde site n'elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede ma chee na otu ikpeazụ ka enyere ikike ịbanye na 4. Ọnụego ya bụ 11 Peruvian soles to okenye.
Ọbịbịa na-eduzi, na-elekọta ndị ọrụ kwesịrị ekwesị, a na-akwụkwa 20 ọhụụ ọhụrụ maka otu ndị mmadụ 20. Ọ dị n’asụsụ Spanish ọ bụ ezie na e nwere ihe ịrịba ama na Spanish na Bekee. Gbakọọ na njegharị ahụ dịruru awa na ọkara. Ndị otu a hiwere nwere ike ichere oge ha na mpaghara nnabata na ebe ezumike nwere ebe nri na ime ụlọ ịwụ. Na ngwụsị izu, ndị obodo na-ere ngwaahịa ha mana n'ime izu ọ dị mma iweta nri na mmiri nke gị.
Ihe ị ga-ahụ na Caral
Obodo nsọ a rụrụ ya n’elu ụlọ nke na-echebe ya pụọ ​​na nsogbu nke okike na ụlọ ya bụ osisi na okwute. Enwere isii pyramid na ngụkọta na okirikiri n'ámá, niile na mpaghara nke 66 hekta Olee ihe enyemaka kewara abụọ zones, elu na etiti.
N’etiti ebe ahụ ogige obibi na ụlọ ọha, ụfọdụ dị na ọkara nke elu, n’ebe ugwu ma nwee pyramid na ala ndị gbara okirikiri abụọ gbara ha n’ihu, tinyere otu square, na ndị ọzọ dị na ọkara ala, n’ebe ndịda, nke nwere obere ụlọ, ebe ịchụàjà, ebe a na-eme egwuregwu na ụlọ. Na mgbakwunye, na mpụta, e jikọtara ụlọ ọzọ. Ọ dị ka pyramid ndị nwere nha dịgasị iche na-acha odo odo na ọcha, oge ụfọdụ na-acha ọbara ọbara. Ha nwere steepụ n’ime etiti, n’elu nwekwara ọtụtụ ụlọ.
Pyramid kasị ukwuu bụ mita 28 n'ịdị elu na ọ bụ kpochapụwo akwụkwọ ozi nke Caral. Onye ọzọ nwere ọwara okpuru ala na olulu ọkụ n’elu, nke ọzọ dị mita 18 n’ogologo. Onye ọ bụla n’ime ha nwere àgwà nke ya. E wezụga ụlọ ndị ahụ nke akwa, ngwa egwu na akpaalaokwu dị mkpa. N’ezie, n’otu n’ime pyramid ahụ a chọtara quipu, eri na eriri ndị ejiri dị ka ngwa eji echekwa ozi ma ọ bụ iji kparịta ụka, nke a na-ewere dị ka nke kacha ochie na Peru.
A na-ahụkwa ihe igwe egwu, opi, na akwa, akwa texti acha, akwa, ụgbụ azụ, eriri, akpụkpọ ụkwụ na geoglyphs na ala na-eme ka mmadụ chee echiche na mbara igwe. Ndị ọkà mmụta ihe ochie na-ekwu na Caral bụ ebe obibi nke ihe dị ka otu puku mmadụ na puku mmadụ atọ, yana ọdịiche dị n'etiti ọha na eze n'etiti ndị a ma ama na ndị okpukpe na ndị nkịtị. Mmepe anya gbanwere site n'ịkụ azụ na ọrụ ugbo na nyocha na-egosi na ha gbanwere ngwaahịa ha na ndị ọzọ, ịbụ ihe dịka isi obodo akụ na ụba mpaghara.
Site na ozi a ị dị njikere ịghara ịhapụ mkpọmkpọ ebe ndị a dị mkpa, na Peru, na America na ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Caral, njem nleta ihe ochie na Peru
Njem njem nlegharị anya nke anyanwụ na ụsọ mmiri na Colombia